FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'I COLLIE BERNARD - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'i Collie Bernard
Alika mifangaro mifangaro Border Collie / Saint Bernard
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mifangaro toy ny alika kely mandritra ny 2 volana— 'BonBon dia mpiampita serivisy St. Bernard / Border Collie. Efa ho 2 volana izy ary milanja mihoatra ny 5 lbs (2kg) amin'ity sary ity. Mahagaga ny fifangaroan'ny Bernard sy Border Collie ary ny alikantsika dia marefo be, mahagaga. Ny reniny dia a Saint Bernard ary ny rainy dia a purebred Border Collie . Ny volon'ny Saint Bernard miaraka amin'ny volo lava sy malefaka an'ny Border Collie dia namorona palitao toy ny landy vita amin'ny landy izay tena miavaka. '
Ny Border Collie Bernard dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Border Collie ary ny Saint Bernard . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mifangaro toy ny alika kely mandritra ny 2 volana— 'Fony izy 7 herinandro dia efa fantany ny fomba hipetrahana . Tiany miparitaka mihoatra ny zava-drehetra ny atiny. Somary ambany lanjany noho ny azy sakafo ankafizina . Na eo aza izany dia mbola matavy foana izy noho ny LONY VOAFY BE. Hatramin'izao dia vitantsika ihany ny nampanina azy hihinana sakafo bebe kokoa!
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mifangaro toy ny alika kely mandritra ny 2 volana— 'Ho vitantsika izany mandehana azy eny ivelany raha vantany vao omen'ny mpitsabo azy ny fitifirany rehetra. Nilaza ny mpitsabo anay fa maminavina izy fa ho GIGANTIC i Bonbon ary izany no tadiavinay, alika goavambe goavambe, milamina toa an'i Bernard, nefa haingana toa an'i Collie.
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mifangaro toy ny alika kely mandritra ny 2 volana— 'Tian'i Bonbon ny kilalao sakaizan'ny sakaizako ho toy ny kilalao tsakoy noho ny azy kilalao alika . '
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mifangaro toy ny alika kely mandritra ny 2 volana mitsako taolana alika— 'Nahazo fitoniana ny reniny sy ny fahaizan'ny rainy i Bonbon, izay heverinay fa mahavariana. Tsy fantatray mihitsy fa ho tsara tarehy toy izao izy ary afaka ny tenanay a alika fianakaviana tonga lafatra . '
sary alika fivontosana sela